Kôlômbia - Wikipedia
Mbola ambangovangony amin'ny resaka firenena ity lahatsoratra ity ary tokony hofenoina.
República de Colombia ((es))
Teny filamatra : Libertad y Orden (Fahafahana sy Filaminana)
Teny ofisialy Espaniola
Tanàna ngeza indrindra Bogotá
- filoha Repoblika ara-parlemanta
- Rano (%) faha 25
- hakitroka faha 28
44 760 630 mpo.
Anaran'ny mponina Kolombiana
Sandam-bola Pesô Kolombiana (COP)
Hiram-pirenena Oh Gloria inmarcesible
I Kôlômbia, na Repoblikan' i Kôlômbia, (amin' ny fiteny espaniola : República de Colombia), dia firenena any avaratra andrefan' i Amerika Atsimo. Izy irery no firenena manana morontsirata amin' ny Ranomasina Karaiba sy amin' ny Ranomasimbe Pasifika. I Bogotá no renivohiny, ny fiteny espaniôla ni teny ôfisialiny ary ny peso no vola ampiasainy. I Kôlômbia no firenena miteny espaniôla ngeza indrindra ao aorian' i Meksika sy i Espaina.
Ny firenena kôlômbianina dia voazara faritany dimy: Karaiba, Pasifika, Anda, Orenokia ary Amazonia: ao anatin' ireo faritany ireo, samihafa ny sakafo, ny mponina, ny fiteny sy ny hetsika ara-toe-karena.
Ny faritanin' ny Anda no be olona indindra: ao no misy ny tanàna manan-danja any Kôlômbia, indrindra i Bogotá, i Medellín, i Bucaramanga, i Cúcuta, i Pasto, i Manizales, i Pereira, i Neiva ary i Ibagué, ary any amin' ny morontsiraka avaratra: ny Karaiba, any no misy an' i Barranquilla, i Carthagène, i Santa Marta, i Sincelejo, i Montería ary i Valledupar. Ny tanàna fahatelon'i Kôlômbia dia i Cali izay miorina eo amin' ny sisintanin' ny faritany Pasifika-Anda.
Ny faritany sasany (Orinokia, Pasifika, Amazonia) indray dia tsy mivoatra tahaka ny faritanin' ny Anda, ny departementan' i Chocó, Vaupés, Guainía, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vichada sy Amazonas no anisan' ny mahantra indrindra.
Lisitra ny firenena
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kôlômbia&oldid=1041147"
Dernière modification le 6 Desambra 2021, à 11:11
Voaova farany tamin'ny 6 Desambra 2021 amin'ny 11:11 ity pejy ity.